Zavatra moana 5 Tsy tokony hataonao toy ny mpankafy Anime - Hafa
Zavatra moana 5 Tokony HATONGA HATONDRANA Aza manao toy ny mpankafy Anime
Nilaza izy ireo fa misy zavatra tsy miova mihitsy. Eny, SASANY People dia tsy maningana amin'izany lalàna izany.
Inona no ifandraisan'ity amin'ny fanaovana zavatra adala amin'ny maha mpankafy anime?
Fa maninona no maninona?
Andao hiresaka momba izany.
Ary ny antony ao ambadika NAHOANA mandany ny fotoananao fotsiny ianao… Matetika kokoa noho ny tsy.
Nalaina tamin'ny zavatra niainako manokana mazava ho azy.
Zavatra moana 5 tokony hijanonanao ho mpankafy Anime:
1. Manandrana mandresy lahatra ny mpanao tantara ny antony «tsara» ny anime
Tsy afaka mandresy lahatra ny saina ianao izay efa voamboatra. Tsy misy hafa amin'ny fomba tsy ahafahanao mandresy lahatra ny Silamo ho tonga Kristiana.
Ny finoan'ny olona IZANY dia miorim-paka lalina. Indrindra raha ny zavatra halany na tsy tiany no resahina.
Nanandrana nandresy lahatra ny olona aho hoe maninona no tsara ny anime. Ary efa natolotro koa hoe inona ny karazana anime tadiavin'izy ireo miorina amin'ny zavatra fantatro momba azy ireo, na izay heverina ho 'tsara' amin'ny ankabeazan'ny mpankafy anime.
Tsy mandeha mihitsy io.
Ny fiezahana manova saina tsy dia sarotra loatra dia sarotra ihany. Fa raha tsy resy lahatra izy ireo dia mila adala ianao vao manandrana.
2. Manandrana mandresy lahatra ny olona hoe nahoana ny anime no 'tsy an'ny ankizy'
Nasongadiko ara-bakiteny tamin'ny olona sasany fa mainty ny loko eo amin'ny rindrina. ary mbola mihodina izy ireo ary milaza amiko fa izany manga.
Fa maninona ny olona no manao an'io? Satria hitantsika amin'ny fomba itiavantsika azy ireo ny zavatra.
Raha tsy afaka mijery zavatra misy zava-kendrena ianao, na manaiky ny zava-misy raha tsy misy mandiso azy mifototra amin'ny zavatra tsapanao, dia tsy maninona izay lazain'ny olona.
Na dia misy aza azo antoka fa anime natao ho an'ny ankizy , ny karazana atiny asongadina ao amin'ny anime dia lalina loatra, misy dikany, matotra ary mampieritreritra ny ankizy ka tsy tokony hodinihiny akory. Amin'ny ankapobeny.
Sariitatra dia natao ho an'ny ankizy indrindra fa tsy sarimiaina.
Ny fiezahana handresy lahatra ireo tsy mpino dia tsy misy dikany ary tsy misy dikany.
3. Mandray am-po ny tsikera rehefa misy maneso ny anime
Rehefa lehibe ianao dia lazaina fa mahafinaritra izao tontolo izao.
Antenaina ianao hino fa tonga lafatra ny zava-drehetra. Like Izany dia traikefa nahafinaritra nofenoina olona mahafinaritra izay tsara fanahy, malala-tanana ary be fitiavana amin'ny hafa.
Izany no fahatsapana fa zaza 'normal'.
Fa raha ny tena izy dia misy assholes izay hanao na inona na inona hahatonga anao hahatsapa ho toy ny sh **, ary tsy fanajana anao hampahatsiaro tena ho tsara kokoa.
Toy izany koa amin'ny anime.
Raha misy mitsikera anao noho ny fitiavanao anime , na manandrana manao anao ho resy amin'ny fahalianana, aza raisina am-po.
lisitr'i shonen jump anime lisitra anglisy voantso
Inona ny hevitra? Tsy mahavita na inona na inona.
Tsy hiova ny sain'izy ireo, ary tsy anjaranao ny manandrana manova ny sain'izy ireo.
Ankoatr'izay - tsy raharahan'izy ireo izany na tianao ny anime na tsia.
4. Tratry ny adihevitra kely miaraka amin'ireo mpankafy tsy sarimiaina
Sarotra noho ny fijery azy. Matokia ahy fa azoko izany.
Ny olona sasany, tsy maninona inona ianao, dia hiezaka ny hiady hevitra noho ny adihevitra, ary hanery ny 'bokotrao' hanome azy ireo fialan-tsiny hanambaniana izay tianao.
Tsy afaka milaza aminao aho hoe impiry izany no mitranga amin'ny Internet. Raha ny marina - mahatsapa fa toy ny mitranga isan'andro izany.
Fa inona ny hevitra? Misy fitenenana tiako tiako toy izao:
“Olona roa mifamaly amin'ny endrika lavitra toa ny adala.”
Miady hevitra amin'ny olona tsy manome tohiny na amin'ny fomba ahoana, mahatonga anao ho dondrona ihany koa. Ary ankoatra izany - tsy mahazo na inona na inona ianao amin'ny farany amin'ny alàlan'ny fianjeran'ny BS an'ny hafa.
5. Mikatsaka fankatoavana ho tia na hijerena «anime»
Iza no mila ny fankasitrahanao?
Fivavahana. Kolontsaina. Tsy raharahako izay antony. Mitovy daholo ihany.
seho anime malaza amin'ny fotoana rehetra
Nahita ny mpankafy sasany manontany tena aho hoe 'OK' ny mijery anime satria Kristiana, Silamo izy ireo, na inona antony hafa alehan'ny olona noho ny fanerena ara-tsosialy.
Ny mpankafy sasany dia voafitaka amin'ny finoana fa zavatra 'ratsy' ny mankafy ny sarimiaina Mampihomehy ireo olona izay mankahala anime ihany, tsy mbola nijery an'io na TSY mahatakatra izay atao hoe.
Ary azoko hoe maninona no mitady fankatoavana ny olona. Mafy ny tsindry.
Rehefa saika tsy mitovy hevitra amin'ny zavatra inoanao na mahaliana anao ny olona rehetra, mora vaky ny tsindry ary milefitra amin'izany.
Fa mila manontany tena ianao amin'izay - hahasambatra ahy ve izany?
Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia miharihary ny valiny.
Tsy mila ny fankatoavan'olon-kafa ianao raha tianao ny anime, na tianao ireo zavatra tianao. Indrindra raha tsy manisy ratsy olona ianao amin'ny fahalianana amin'izany.
Aza mandany ny fotoananao handresy lahatra ny mpahay tantara momba ny sarimiaina.
Aza manahy momba ny eritreritry ny olona momba ny anime.
Raha heverin'ny olona fa ho an'ny ankizy ny anime dia avelao izy ireo hieritreritra izany.
Aza variana amin'ny ady hevitra kely amin'ny olona kely.
Tsy mila fankatoavana ianao raha te hahaliana ny anime (na zavatra hafa) tianao.
Ny teboka faha-5 no zava-dehibe indrindra. Miankina aminy ny fahasambaranao!
Recommended: Ahoana no fomba hahatongavanao ho protagonista anime amin'ny dingana mora 17
20 anime ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra
ahoana no fahitako ny sarimiaina malalako
silaka ambony indrindra amin'ny fiainana tantaram-pitiavana anime
lisitra anime malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra